“ ညီမလေးက... ဒီ .. ခွပ်ဒေါင်း ရင်ထိုးလေးကို ဘာလို့ ထိုးထားတာလဲ..”
စူးရှရှ မျက်လုံးတွေနဲ့ ပြုံးဟဟ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းကြောင့် ၊ အကျီ င်္ ကော်လာလေးကို မသိမသာ ဖိကိုင်ရင်း ၊ အနည်းငယ် လန့်သွားမိ တာတော့ ၀န်ခံပါတယ်။
အဲဒီနေ့က..... လှိုင် တက္ကသိုလ် ရဲ့ ကျောင်းဖွင့်စ ရက်တရက်......။
လှိုင်းလုံးကြီးတွေ ငြိမ်သက်ပြီး လှိုင်းပုတ်သံ သဲ့သဲ့သာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၊ မုန်တိုင်း စဲကာစ ကမ်းခြေ သောင်ပြင် တခုလို ၊ နေရာ မကျသေးတဲ့ ရင်အနာတွေ နဲ့ ၊ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေ ပြန်လည် သက်ဝင် လှုပ်ရှား လာတဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ရဲ့ နွေနှောင်း ရက်တရက်။
ကိုယ်တွေ အတွက်တော့၊ ပထမဆုံးသော မ၀ံ့မရဲ တက္ကသိုလ် ခြေလှမ်းများ။
မိန်းကလေး အယောက် ၂၀ လောက်သာ ရှိတဲ့၊ စာသင်ခန်းလေး ထဲက နံဘေးကခုံမှာ လာထိုင်တဲ့ မျက်လုံး ၀ိုင်းဝိုင်းနဲ့ ကောင်မလေးကို ပထမဆုံး မိတ်ဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့တာ ။ နယ်ပုံစံ လေးချင်းမို့ ၊ နှစ် ယောက်သား ဘေးခြင်းကပ်ပြီး ၊ ညနေစောင်း အတန်းပြီးချိန်အထိ ကုပ်ကုပ်လေး အတူ ရှိနေခဲ့ကြတာ...။ အခု သူ့ကိုလာကြိုတဲ့ အကိုဖြစ်ဟန်တူတဲ့ လူတယောက်က ကိုယ့်အကျီ င်္ ကော်လာက ငွေရောင် ခွပ်ဒေါင်းရင်ထိုးလေး တကယ့်သေးသေး မျှင်မျှင်လေးကိုမှ ဘယ်လိုမြင်လို့ ဘယ်လိုသဘောနဲ့ မေးလေ သနည်း။
သတ္တိတွေ တချက်လောက် ရှိုက်သွင်းလိုက်ရင်း.....
“ ခွပ်ဒေါင်း ရင်ထိုး ထိုးတာ.....ခွပ်ဒေါင်းတွေ အတွက် ဂုဏ်ပြုလို့ပေါ့.....” လို့ ခပ်မာမာ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
သူရဲ့ ညီညာတဲ့ သွားတွေ ပေါ်အောင် ၊ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရီ လိုက်ရင်း ..... “ အကိုက သဘောကျလို့ ချီးကျူးမလို့.. မေးတာပါကွ.....” လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ၊ သူ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အလင်းတခုကို အသေအချာ တွေ့လိုက်ရသည်။ အဲဒီအလင်းမျိုးကိုလည်း အဲဒီအလင်းအကြောင်း ကောင်းကောင်း သိတဲ့သူခြင်း မှသာ နားလည်နိုင်တာမို့ ၊ ရင်ထဲက သံသယ နဲ့ ကြောက်စိတ်တွေ ချက်ခြင်းပဲ ကြက်ပျေက် ငှက်ပျေက် လွင့်စင် သွားတော့တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ တက္ကသိုလ် ရောက်ခါစ သူ့ ညီမလေးကို ညနေတိုင်း လာ- လာကြိုတတ်တဲ့.. အကိုကြီး ကိုသိမ်းဆွေ နဲ့ ကိုယ်တို့ တသိုက် ရင်းနှီး သွားကြ တော့တယ် ။ အားလုံးက သူ့ ညီမလေး ခေါ်သလို
“ အကိုကြီး ” လို့ ပဲ ခေါ်ကြတယ် ။ သူ ကလည်း သူ့ ညီမကို ခေါ်သလို “ ညီမကြီး တို့ ” လို့ သုံး နှုံး လေ့ ရှိတယ်။
အဲဒီတုန်းက အကိုကြီးက တတိယနှစ်ကျောင်းသား။ မောင်နှမ တသိုက် ဖျာပုံကနေ ရန်ကုန်မှာ တက္ကသိုလ် လာတတ် ကြတာ ။ နောက်တော့ သူငယ်ချင်း နဲ့ အင်းလျားဆောင်မှာ တခန်းတည်း နေ ... တစားပွဲတည်း စား.. တကုတင်တည်း အိပ် ... စာတအုပ်ထဲ အတူ ကျက်ရင်း ၊ ဘ၀ခြင်းတွေပါ နားလည် ရင်းနှီးခဲ့ ကြတာ ။ သူ့ ညီမလေးလည်း ကိုယ့် ညီမ.. ။ ကိုယ့် အစ်မကိုလည်း သူက မမ ခေါ် ။ သူ့ အကိုကြီး လည်း ကိုယ့် အကိုဖြစ် ။ မောင်နှမတွေ ပွားများလာခဲ့လိုက်တာ...။ လကုန်ရက်တွေဆို ဖျာပုံကနေ ရန်ကုန်ကို တက်လာတတ်တဲ့ အရပ်ရှည်ရှည် မျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ သူငယ်ချင်းတို့အဖေ အလွတ်သင် ကျောင်းဆရာကြီးက ဖျာပုံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် လွှတ်အမတ် ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့.. ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းခြင်း ပို စည်းလုံး မိကြ ။ မိသားစုခြင်း ပို ရင်းနှီးခဲ့ကြ ။
သားသမီးတွေကို ၊ အရမ်းဂရုစိုက်ပြီး အရိပ် တကြည့်ကြည့်နဲ့ အကုန် လိုက်လုပ်ပေးတတ်တဲ့ အဖေကြီး တယောက် လကုန်လို့ အဆောင်ရှေ့ကို ငါးပိကြော်ပုလင်းတွေ ဖျာပုံ ပုဇွန်ခြောက်ကြော်ထုပ်တွေ နဲ့  ရောက်လာပြီဆို.. သူတို့ တအုပ်လုံး အဖေကြီးတို့ အကိုကြီးတို့ နဲ့ အတူတူ ပျော်လို့.. ။ မိသားစု မောင်နှမ သားခြင်းကို ချစ်ခင်ဂရုစိုက် တဲ့နေရာမှာ အကိုကြီး ကလည်း အဖေတူ သားပါပေ..။ ဒါတင်မက တိုင်းပြည် အရေးမှာလည်း မဖင့်နှေးခဲ့ပဲ အရေးတော်ပုံ ကာလက အကိုကြီးပါခဲ့လို့ ထောင်ကျ ခဲ့ သေးတယ်... ဆိုတာ သိလိုက်ရ တော့ ၊ သူတို့ တသိုက်လုံး အကိုကြီးကို သူရဲကောင်းကြီး တယောက်လို မျက်လုံး
အ၀ိုင်းသား နဲ့ ငေးကြည့် ခဲ့ ကြ ရပြန်ရော...။
တကယ်တော့ အဲဒီလို ခြေရာ တထပ်တည်း လျှောက်နေကြတဲ့ ၊ သားအဖ နှစ်ယောက်ကို ၊ စိတ်ဓါတ် ခိုင် ခိုင်နဲ့ ပံ့ပိုး ပေးနေခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အမေ ကိုလည်း ၊ သူတို့ စိတ်ဝင်တစား ချစ်ခင် နေခဲ့ ကြတာပါ။ အကိုကြီး တယောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဘယ်ဆု ရတဲ့ ၉ ၀ လှုပ်ရှားမူ မှာ ၊ ဒုတိယအကြိမ် အဖမ်းခံရပြန်တော့ ဖျာပုံ ဆိပ်ကမ်းကနေ သဘောင်္ကြီးနဲ့ ခေါ်သွားတာကို. အဖေကြီးက ကြည့်ပြီး မျက်ရည် ကျနေခဲ့တဲ့ အချိန် မှာ အမေကြီးက အံကို တင်းတင်းကြိတ်ရင်း မျက်ရည် တစက် မကျခဲ့ ဘူးတဲ့..။
(၀ဲမှယာ) ကိုဂျင်မီ၊ ကိုသိန်းဆွေ၊ ကိုမာကီး၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဇေယျ (အားလုံး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲ)
ဓါတ်ပုံကို ဒီနေရာမှ ယူပါသည်။
အဲဒီလိုနဲ့ အချိန်ကာလ ယန္တယားကြီးထဲမှာ ၊ ကျောင်းတွေလည်း ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက်...။ ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း နီးလိုက် ဝေးလိုက် နဲ့ပဲ ဘွဲ့တွေ အသီးသီး ရသွားကြပြန်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင် အသီးသီး ရည်မှန်းချက် အသီးသီး နဲ့ ဘ၀တွေ အသီးသီး တည်ဆောက်ကြ ပြန်တယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့် နှစ်က တခါ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြန်ဆုံကြပြန်တော့ အကိုကြီးက ပြန်လွတ်လာ ပြီး ၊ အဖေကြီးက ထောင်ထဲကို ပြန်ရောက် နေပြန်တယ်... တဲ့ ။
အထဲက ထွက်လာတာ မကြာသေး ပေမဲ့ ၊ အကိုကြီး ကတော့ သူ လုပ်စရာရှိတဲ့ ပါဝင်စရာ ရှိတဲ့ ကိစ္စတွေ မှာ ၊ ပုံမှန် ပါဝင်ရင်း မိသားစုစီးပွားရေးကို ကျားကန်ပေးနေရှာ တယ်တဲ့ ။ နောက်တော့ လှုပ်ရှားမူ သတင်း ဓါတ်ပုံ တချို့မှာ အကိုကြီးကို မထင်မရှား ပြန်တွေ့လာရပြန်တယ်။ တဖြည်းဖြည်း ပြန်ပြီး မြင့်တက်လာပြန် တဲ့ နိုင်ငံရေး ဒီလှိုင်း အရှိန်နဲ့ အတူ. အကိုကြီး ရဲ့ သတင်း အပိုင်းအစ လေးတွေ အင်တာနက် စာမျက်နှာတချို့ မှာ ဆက်တိုက် ဆိုသလို ဖတ်လာရတယ်။ အဲဒီ အချိန်တွေ တလျှောက်လုံး သူငယ်ချင်း တို့ မိသားစု နိုင်ငံရေး လှိုင်းလုံး တွေ ကို နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ ကြံ့ ကြံ့ ခံ နေခဲ့တာ တွေကို လည်း ကြားနေ ခဲ့ ရတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ်တိုင်မှာလည်း လှိုင်းတွေကြား မှာ တလူးလူး တလွန့်လွန့် ဆိုတော့ ၊ မုန်တိုင်းတွေ မစဲ နိုင်သေးတဲ့ ကောင်းကင်ညိုမဲမဲ ကြီးကို လှမ်းမျှော်ရင်း စိုးရိမ်စိတ် ဇောအဟုန်တွေကြားမှာ ယုံကြည်စိတ်ဆန္ဒတွေတောင် ထုံထိုင်းနေခဲ့မိတယ်။
အဲဒီ ကောင်းကင်ညိုမဲကြီး အောက်မှာ ၊ မတ်မတ်ရပ်ပြီး ကျန်နေခဲ့ကြတဲ့ အကိုကြီးတို့ လို လူတွေ အတွက်ကတော့ ဘယ်လောက်ပဲ မုန်တိုင်းတွေ ထန်လာပါစေ... လှိုင်း ဆိုတာကို ပူပင်နေစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပေ..။ ဘယ်လိုလှိုင်းမျိုးပဲ...လာပါစေ.... လှိုင်းမြင့်လို့လည်း ဆင့်တက် ပြေးမည်မဟုတ်..။ လှိုင်းဝေးလို့လည်း. ..သွေးအေးနေမှာ မဟုတ်...။ ဟောဒီ လှိုင်းတက် လှိုင်းကြမ်း ပြင်းထန်လှတဲ့.. ကမ်းခြေမှာပဲ သူတို့ လုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို.. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆောင်ရွက်နေဖို့ ရန်သာ။
အခုတော့တခါ၊ နောက်ထပ် လှိုင်းတကွေ့ကို ရဲရဲ တိုးရင်း နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေနဲ့ အကိုကြီးက စစ်တွေထောင်မှာ..ဆိုပြန်တော့ ၊ အဖေကြီး နဲ့ ကျန်သူတွေက မိသားစု စီးပွားရေးကို ကျားကန်ပြန်ပေါ့.။ သူတို့ လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လို့.. ။ ဘယ်ကိုမှ မရွေ့.. ။ မုန်တိုင်း တွေ ထန်တတ်တဲ့ အဲဒီ ကမ်းခြေမှာပဲ မြဲမြဲမြံမြံ....။
ပြည်သူ ပြည်သားတွေ အားလုံးရဲ့ ဘ၀တွေ နဲ့ ကျားကန် ထားရတဲ့ ၊ တိုင်းပြည် ကြီးကတော့ ၊ သူ့အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ ၊ ဆောင်ရွက် ပြီးမြောက် သွားခဲ့ကြတဲ့ ၊ လှိုင်းမကြောက်သူ တွေကို ၊ တနေ့မှာတော့ လွတ်လပ်ခြင်း နဲ့ ရွှင်လန်းခြင်း တွေကို ၊ ပြန်လည် ပေးဆပ် ဂုဏ်ပြု ဦးမှာပါလေ... ။ အဲဒီ တနေ့ကိုလည်း အမြန်ဆုံး ရောက်ပါစေ .... လို့ သာပဲ။
(သမိုင်းမတင်ရသေးသော .. ၄၇ နှစ်မြောက် .. ဆဲဗင်းဇူလိုင် အား.. ရည်စူး ဂုဏ်ပြုလျက်..ရေးသားပါသည်)
၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
ဆဲဗင်းဇူလိုင် ပို့စ် အဟောင်းများ-
၀၇-၀၇-၀၇ သို့ သမိုင်းအပိုင်းအစများ
Labels: Free Burma , friends
အခုလို ဖော်ပြပေးလို့ သိခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မှတ်တမ်းတင်ရမယ့် သူရဲကောင်းတယောက်ကို မှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ....
သူတို့အားလုံးဟာ တို့တွေအားလုံးရဲ့ အကိုကြီးတွေပဲပေါ့ ကေ..။
လှိုင်းမြင့်လို့လည်း..ဆင့်တက်ပြေးမည်မဟုတ်..လှိုင်းသေးလို့လည်း..သတိနဲ့ဝေးနေမှာ မဟုတ်..ဟောဒီ လှိုင်းတက် လှိုင်းကြမ်း ပြင်းထန်လှတဲ့..ကမ်းခြေ မှာပဲ.. သူတို့လုပ်စရာ ရှိတဲ့ အလုပ်တွေကို..တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဆောင်ရွက်နေမည့်..သူများပါပေ..တဲ့။
ကျောင်းသား သူရဲကောင်းတို့ သွေးမြေကျတဲ့နေ့မှာ သူရဲကောင်းတွေအကြာင်းကို မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုပေးတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အာဇာနည်မျိုးရိုးတွေပေါ့။ တကယ်ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ အဲသည်လို ကြံ့ကြံ့ခံနေတဲ့လူတွေအကြောင်း မြင်ရကြားရတော့ အားလည်းရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ သတ္တိတွေကို အားလည်းကျမိပါတယ်။
ကေေ၇းထားတဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုဇာတ်လမ်းလေးက တိုပေမယ့်လည်း ဖတ်ပြီးခံစားကြေကွဲရနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကတော့ ရင်နှင့်အမျှပါ....ဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ကေ....
အမရေ မမီပေမဲ့ လူကြီးတွေ ပြောပြတိုင်း ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရဆဲပါ ခုလို ဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လှိုင်းမကြောက်သူ တွေကို ဦးညွှတ်သွားပါတယ်......
ကိုယ့်ထက် သတ္တိကောင်းပြီး အနစ်နာခံလုပ်ရဲတဲ့လူတွေအားလုံးကို လေးစားမိပါတယ်။
သူတို့ကို တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်တဲ့နေ့ မြန်မြန်ရောက်ပါစေ။
အာဇာနည်တွေကို တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်လို့ ရတဲ့ နေ့ 
စွန့် ဝံ့သူတွေ စတေးခဲ့သူတွေကို အားပါးတရ ပြန်လည်ဂုဏ်ပြုရတဲ့ နေ့ဆိုတာ ရှိအုံးမှာပါ....
လှိုင်းမကြောက်သူတယောက်အကြောင်းကို လေးစားဂုဏ်ယူစိတ်နဲ့ဖတ်သွားပါတယ်အမရေ။ ကိုယ်မသိမမှီလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေမို့ အိပ်ရာဝင်သူရဲကောင်းပုံပြင်တွေလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ရှိနေခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေပေါ့။
တကယ့်လေးစား ဂုဏ်ပြု စံတင်ဖွယ်ရာ
အာဇာနည် မျိုးရိုးတွေ ပါပဲ
အနော်တို့က အဲ့သည့်အကိုတွေ(ဦးလေးတွေဆို ပိုမှန်မယ်)အကြောင်းကို ကြားဖူးရုံသာ ကြားဖူးကြတာဗျ။သေသေချာချာ မသိကြဘူး။မသိဘူးဆိုတာကလဲ အနော်တို့ သိတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့ အဲ့သည့်အကိုတွေအကြောင်းကို စုန်းစုန်းမြုပ်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်ကြတာလေ။ခုတောင် RFAတို့ DVBတို့ အားကိုးလေးနဲ့ သိနေရတာ။ကျေးဇူးဗျာ။ခုလို သေသေချာချာ သိရတဲ့အတွက်။
ထောင်တခါကျပေမယ့်လဲ နောက်မဆုတ်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ နော်...
တို့ပြည်မှာ ဒီလိုသူရဲကောင်းတွေ မဖော်ထုတ်ရသေးတဲ့သူရဲကောင်းတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်.. အလေးပြုလျှက်ပါ..
သူပထမတခါထောင်က ထွက်တော့ ခဏရဟန်းဝတ်သေးတယ်.. ရဟန်းဝတ်နဲ့ အမတို့ ပုသိမ်အိမ်ကို လာလည်သွားသေးတယ်...
နောက်တစ်ယောက် အမှတ်တရရှိနေတာက..Evergreen က ကိုခင်မောင်ရွှေ.အရပ်ရှည်ရှည် ခါးကိုင်းကိုင်းနဲ့..ကျောက်ပန်းတောင်းသား..ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့သူ.ဆုံးရှာပြီလို့ကြားတယ်..
မှတ်မှတ်ရရ..1/92 လား 2/92လား နဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုပြီးစလုပ်တဲ့အချိန်..MI က ကျွန်တော်တို့အားလုံးစာရွက်တစ်ရွက်စီဖြည့်ခိုင်းပါတယ်..နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မှာလားတို့..
နောက်တစ်ရက်ကျတော့ MI က ကျွန်တော့်နာမည်..ကိုသိန်းဆွေနဲ့တချို့ကျောင်းသားတွေကိုထပ်ခေါ်ပါတယ်..
လှိုင်းမကြောက်သူများကို အလေးပြုသွားပါတယ် ကေရေ.. ဒီလို မှတ်တမ်းတင်ပေးလို့လဲ ကေ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
အခုလို မော်ကွန်းထိုးထိုက်သူတွေကို တာဝန်သိသိ ဖော်ထုပ်ပေးတဲ့အတွက် လေးစားပါတယ် ကေရေ...
July 8, 2009 at 6:01 AM
အခုလို ဖော်ပြဂုဏ်ပြုပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ခွပ်ဒေါင်းသွေးဟာ အမြဲတမ်း နီစွေးနေမှာပါ...ခေတ်အဆက်ဆက်မှာ သမိုင်းကြောင်းဆိုတာ ကျန်ခဲ့တာပါပဲ...
အစ်ကိုကြီးတို့ကတော့ တာဝန်ကျေပွန်စွာ မော်ကွန်းရေးခဲ့ပြီးပြီနော်.....
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မကေ။ နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ အခုလို အမှန်အကန်စွန့်ခဲ့သူတွေ ရှိခဲ့၊ ရှိနေဆဲဆိုတာ အနီးကပ်ဆုံး လူသားတွေက ဖွင့်ပြလို့ သိရတိုင်း ရင်ထဲမှာ ၀မ်းသား ၀မ်းနည်း ခံစားမိတယ်။ နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့ စိတ် အပြည့်အ၀ ရှိပေမဲ့ နှစ်ဘက်လုံးက နိုင်ငံရေး လုပ်စား နေကြတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို စိတ်မ၀င်စားတော့တာ ကြာပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံပေမဲ့ သူ့ပါတီကို အားမပေးတော့တာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ အုပ်စု ကိုတော့ တကယ့်နိုင်ငံရေး သူရဲကောင်းလို့ သတ်မှတ် ထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေဟာ စေတနာပိုပါ တယ်လို့ ခံစားရလို့ပါ။ လူကြီးတွေအတွက် ချကြွေးခံ ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေ ဘ၀ကနေ လူကြီးတွေ ဖြစ်လာ တာမို့ သူတို့သာ ဦးဆောင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာအလယ်မှာ ပြန်များ ဦးမော့လာမလားလို့ မျှော်လင့်နေမိဆဲပါ။ မကေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မကေတို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဘ၀ကို ဒီထက် အသေးစိပ် ရေးပေးပါလား။ သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀ကို အထူး စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှု အပါအ၀င်ပေါ့။
ဂျုနို- ကိုအောင်သာငယ်-မချိုသင်း-မငယ်နိုင်-ကိုပေါ-မီးငယ်- တောင်ပေါ်သား-သန့်-ပီတိ-ရာခေလ-မေ့သမီး-မမသီရိ- ရည်မွန်-မခင်မင်းဇော်-မသိင်္ဂနွယ်-ကိုလူထွေး နဲ့ ရဲ- အားလုံးပဲ.. မှတ်ချက်ပြု သွားတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိတယ်။
ကိုနေလင်း- ရေးလိုက်တဲ့..မှတ်ချက်တခုက.. အကိုကြီး ကိုသိန်းဆွေ အကြောင်းကို ပိုပြီး ပေါ်လွင် ထင်ရှား သွားစေတာမို့.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အမည်မသိ-စာဖတ်သူ အတွက်တော့..အခုလို စာပိုဒ်လေး အနဲငယ်ကြောင့်..အမြင်မကြည်မူတွေ..အနဲငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှင်းလင်းသွားတယ် ဆိုရင်..ကျမ ၀မ်းသာရမှာပါ။ ထပ်ပြီး ဝေမျှချင်ပြန်တာက..တချိန်က..ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့..ပဲခူးကလပ်က..ညဖက်ခွေးအိပ်လို့..ခွေးတွေနေတယ်လို့..ပြောလို့မရပါဘူး.. ဆိုတဲ့ စကားလေးပါပဲ။ အများစု- ယေဘုယျ- ချွင်းချက်- ဆိုတဲ့ သတိပြုစရာ ပမာဏတွေ ရှိနေတာရယ် ကိုရော- မျက်မြင်ပစ္စခ ရလဒ် တွေကြောင့်ရယ်ရော.. အခုလို ခံစားမိတယ် ဆိုတာကို နားလည်မိပါတယ်။
Toe Lwin said...
ကေ ဆိုတာဘယ်သူလည်း ကျွန်တော် သိချင်ပါတယ်။
ကိုသိမ်းဆွေ အကြောင်းရေးတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်
သူနာမည်က ရှားရှားပါးပါး မ တပ်နဲ့ သိမ်း တာပါ။ န တပ်နဲ့ မဟုတ်ဘူး။ ဘိုဘို Facebook ကနေ ဒီဆောင်း
ပါးကိုရှာတွေ့တာပါ၊ ကျွန်တော် Facebook မှာ သူ့ဓါတ်
ပုံတွေရှိပါတယ်။ သူ့ချစ်သူလည်း ဒီဆောင်းပါး ဖတ်ပြီး
အပေါ်က အမည်မသိ ရေးသွားတဲ့မှတ်ချက်ကို သဘောတူပါတယ် ကေ..နောင်တော်ကြီးတွေရဲ့ အကြောင်း သိသလောက် အသေးစိပ်ရေးမယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့...
ကိုတိုးလွင်- အသိအမှတ်ပြု တာ ၀မ်းသာပါတယ်။ တနေ့တော့..အကိုကြီး ကိုသိမ်းဆွေ ကိုယ်တိုင် ဖတ်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူ့ချစ်သူ နဲ့ အမြန် ပြန်လည်တွေ့ဆုံ ရပါစေ လို့လည်း ဆန္ဒပြုပါတယ်။
မီးငယ်ရေ- အဆင်ပြေ အချိန်တန်တဲ့ အခါ..အဲဒီလို စာတွေ အများကြီး ဖတ်ရ ပါလိမ့်မယ်။ သမိုင်းမ၀င်သေးပေမဲ့..သမိုင်းတင်နိုင်တဲ့ ရုပ်ပုံလွှာတွေပေါ့။
ဆယ်တန်းတုန်းက သူတို့အိမ်မှာ ဘော်ဒါသဘောမျိုး
၁ လနီးပါး သွားနေဖူးတယ်။
သမိုင်းတင်နိုင်မယ့် ရုပ်ပုံလွှာတွေကို ခံစားဖို့ သတင်းကြားယုံနဲ့တင် ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ...ဘယ်အချိန်ဘဲ ရေးရေး စောင့်ဖတ်ဖို့ အဆင်သင့်ပါကေ...
သမိုင်းတွင်နေတဲ့ သူတယောက်အကြောင်း မှတ်တမ်းလေး ဖတ်သွားပါတယ်။
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကေ...
July 14, 2009 at 9:01 AM
ဒီနေ့၂၉ . ၅ . ၂၀၁၃နေ့ မှာ ညီမ ရေး တဲ့
လှိုင်းမ ကြောက်သူ များဆောင်းပါး လေးဖတ်မိ
တယ် အတိတ် ကိုပြန်ပြီး သတိ တရ ဖြစ်မိတယ်
ကျောင်းသား ဘဝထဲ ကအခုအချိန်အထိ
ထောင် ထဲ ဝင် လိုက် ထွက်လိုက် နဲ့၅ ကြိမ်
ဒေါ်အောင် ဆန်းစု ကြည် နေအိမ် မှာအကျယ် ချုပ်
နဲ့ တစ်လ အခက်အခဲ အမျိုးမျိုး ကိုကြုံခဲ့ ရတယ်
ဒိအပြင် အ ဖေ ကြီးနဲ့ညီလေး ပါထောင် ကျ ညီမ
သူငယ် ချင်းကလည်းကြိုးစားပန်းစားရထားတဲ့ဂျပန်
ပညာတော်သင် ခရီးကို နိင် ငံ ရေးမိသား စုဖြစ်နေ
လို့ သွား ခွင့် မရခဲ့သူလည်းစိတ်ဓါတ်တွေ ကျ ပြီး
မိသားစု အားလုံးရိုက် ခတ် ခံ ခဲ့ ရပါတယ်။
အဲဒီအခ်ျန် မှာအ ကြောက် တရားကြီစိုးခဲ့
လို့ အကိုတို့ ကို ပါတ် ဝန်းကျင် ကပါမ ခေါ်မ ပြော
ဖြစ်လာတယ် ဆွေ မျိုးတွေပါပါတယ်ဗျာ
အဲ ဒီလိုကာ လမှာညီမက မှတ် မှတ် ရ ရ စာရေးသားပေးတာကိုကျေးဇူတင် ရ ပါ တယ်
အကို တို့ ထက် မိသားစု ဘဝပျက်သွားသူတွေ
ယုံကြည် ရာအတွက်ဘဝကို စ တေးပေးပြီး ကို့ နှလံုးသားထဲမှာသာထား ပြီးကျေ နပ်စွာတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆပ်နေကြသူတွေအများကြီးပါ အဲ ဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းရေးစေချင်
တယ် အကို ပြောချင် တာက အ ကြောက်တရား
ကြီးစိုး အားကောင်းနေချိန် မှာ မှန်တဲ ဘက်က ရပ်တည် ပြီးရေး ပေးရဲ တာ ကို ချီး ကြူးတာပါ
စာပြန်ဖတ် ပြီးချိန် မှာ အတိတ် ရဲ့ခါးသီးမှုတွေကိုပြန်သတိရတယ် ဒါပေ မဲ့ အကို တို့ လုပ်နေ တာ နိုင် ငံ့အ ရေး ပါ နိုင် ငံ့အ ရေးကို
ခံ စားချက် နာကျည်း ချက်တွေနဲ့ မလုပ်ပါ ဘူး
တိုင်းပြည် က်ုကောင်းစေ ချင် တဲ့စိတ်
တည် ဆောက် ချင် တဲ့ စိတ် တွေနဲ့ကျရာ နေ ရာက နေဝိုင်းထမ်းပေးနေပါတယ်
ကျေးဇူးတင် ပါတယ် မိသားစု အားလုံးကျန်း
မာ ချမ်းသာ ကြ ပါစေ
လေးစား ခင် မင် လျှက် . . . . . . .ကိုသိမ်းဆွေ